कृषकहरुलाई खुशीको खबर ! ३० टन मकै बीउ वितरण गरिने « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
कृषकहरुलाई खुशीको खबर ! ३० टन मकै बीउ वितरण गरिने
प्रकाशित मिति : २०७४, ८ चैत्र बिहीबार
काभ्रे / जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यो वर्षपनि अनुदानको मकै बिउ वितरण सुरु गरेको छ । कृषि आपूर्ति ब्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार मकै बिउ वितरण सुरु गरिएको हो । यो वर्ष ३० टन मकैको बिउ वितरण गरिने कार्यालयका बाली विकास अधिकृत थर्क जिसीले जानकारी दिए ।
बाली विकास निर्देशनालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नजातका मकै बीउ कृषक, कृषि समूह र कृषि सहकारीलाई वितरण गरिने छ । यो वर्ष रामपुर कम्पोजित, देउती, अरुण जातका मकै बीउ कृषकले लैजान पाउने छन् । जिल्लाको २५ हजार ३ सय ५३ हेक्टर जमिनमा मकै खेती हुदैँ आइरहेको छ ।
यसैबीच जिल्ला कृषि विकास कार्यालय यो पटक पनि हाईब्रिट जातका मकै नलगाउन कृषकहरुलाई आग्रह गरेको छ । थोरै ठाउँमा धेरै बाली फन्ने भन्दै आफुले सिफारिस गरेभन्दा बाहिरी एग्रोभेटबा हाईब्रिट मकै लगाएर दाना नलागे आफुहरु जवाफदेहि नहुने कार्यालयका बाली विकास अधिकृत थर्क जिसीले बताए ।